၃ မိနစ်အတွင်းအလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက် QR Code ပြုလုပ်နည်း• Pageloot
အလှအပထုတ်ကုန်များအတွက် QR ကုဒ်များ - ဒါကသင့်ရဲ့အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြွင်းသောအရာမှထင်ရှားစေရန်မည်သို့ကူညီသနည်း။
beauty အလှအပထုတ်ကုန်များသည် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက် QR ကုဒ်များကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုနေသည်ကိုလေ့လာပါ။
customers ဖောက်သည်များနှင့်တုန့်ပြန်မှုများရရန်သင်၏ QR Code ကိုအဘယ်ကြောင့်လုပ်သင့်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
ထုတ်ကုန် QR Code ကိုဖန်တီးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်နည်းပညာကိုအကြီးအကျယ်အသုံးပြုခြင်းသည်အလှအပတံဆိပ်များ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ယခင်ကကဲ့သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပေ။ အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် တစ် ဦး QR Code ကိုပါစေ။ အလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက် QR ကုဒ်များသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုကျန်သည့်အရာများမှထင်ရှားစေရန်ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်း ၇ ခုရှိသည်။
အလှအပထုတ်ကုန်များအတွက် QR ကုဒ်များသင့်အမှတ်တံဆိပ်ထွန်းလင်းရန်မည်သို့ကူညီမည်နည်း
#1 သင်၏နမူနာအလှအပပစ္စည်းများအားအခမဲ့နမူနာများပေါ်တွင် QR ကုဒ်များဖြင့်မြှင့်တင်ပါ
အလှအပနမူနာသည်သင်မြှင့်တင်လိုသည့်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ များစွာသောအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ယင်းသည်မည်မျှအကျိုးအမြတ်ရှိသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်! နာမည်အနည်းငယ်ဖြင့်နာမည်ပေးသော Drunk Elephant, Smashbox, Kat Von D Beauty Madara Cosmetics ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၀ ယ်ယူသူများကို e-store ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အတူအခမဲ့ထုတ်ကုန်နမူနာများကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
အရ Euromonitor သုတေသန, အခမဲ့နမူနာအလှကုန်ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူရန်အကြီးမားဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများထဲမှခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာ ၀ ယ်ယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ စားသုံးသူသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအတွက်အသစ်ဖြစ်သည်။ ၀ ယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီရန်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ပေးလိုသည်။ သို့သော်နမူနာသေးငယ်သောကြောင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှုအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နေရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဤနေရာတွင် QR Code ပြုလုပ်သူသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနမူနာတွင်စကင်နာများ ထပ်မံ၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ရန် QR Code သေးသေးလေးကိုထည့်ပါ။ ၎င်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာသို့မဟုတ်သတင်းလွှာတစ်ခုအတွက် sign-up link တစ်ခုသို့လည်းညွှန်ကြားနိုင်သည်။
အသုံးပြုပါ အခမဲ့ QR Code ကိုမီးစက် သင့်ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထုတ်ကုန်နမူနာအပေါ်။ ဤအရာအားလုံးသည်စားသုံးသူများအား ၀ ယ်ယူသူအားအသိပေးအကြောင်းကြားရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုအတွက် QR Code လုပ်နည်း.
#2 သင်၏ QR ကုဒ်များဖြင့်သင်၏ပုံနှိပ်ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အမှန်တကယ်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သို့သော်ပုံနှိပ်မီဒီယာသည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များထံရောက်ရှိရန်အလွန်ထိရောက်စွာရှိနေသေးသည်။ ကဝယ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်ချမှကြွလာသောအခါ ပုံနှိပ်မီဒီယာသည်အယုံကြည်ရဆုံးသူဖြစ်သည် ကြော်ငြာချန်နယ်။ သင်၏ QR ကုဒ်များဖြင့်သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများမှအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည်။
လက်ကမ်းကြော်ငြာများ၊ ပိုစတာများ၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများသို့ QR ကုဒ်များထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အသွားအလာကိုမောင်းနှင်ပါ။ QR Code ကိုစကင်ဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ပြောင်းလဲနေသော QR Code ဖြင့်သင်သည်ထူးခြားသောလင့်ခ်တစ်ခု ဖန်တီး၍ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုစာရင်းအင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်မည်သည့်ပုံနှိပ်ကြော်ငြာသည်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာတွေ့နိုင်သည်။
ပုံနှိပ်ကြော်ငြာများတွင် QR ကုဒ်များအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါသလား။ ဒီ post ထွက်ကြည့်ပါ Flyers များအတွက် QR Code လုပ်နည်း.
အခမဲ့ QR Code Generator သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပုံနှိပ်ကြော်ငြာများဖြင့်ပို့သည်။
#3 အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွင်းရှိအလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက် QR ကုဒ်များကိုသုံးပါ
ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင်၏အလှအပထုတ်ကုန်ကိုရောင်းဝယ်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စားသုံးသူအများစုကအွန်လိုင်းအလှအပပစ္စည်းမ ၀ ယ်ခင်သုံးသပ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းနီးပါးဖတ်လေ့ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
In-store shoppers များအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏အရောင်းကိုတိုးမြှင့်ပါ။ အွန်လိုင်းသုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ရှုရန်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်တိုက်ရိုက်စျေးဝယ်သူများအတွက် QR ကုဒ်များကိုတင်ပါ။ ၎င်းသည်လက်လီအတွေ့အကြုံအတွက်တန်ဖိုးကိုတိုးစေပြီးစျေး ၀ ယ်သူများအားသူတို့လိုအပ်သည့်အခါအဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်စေသည်။
QR Code တစ်ခုပြုလုပ်ပါ၊ သူတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုဖြေရှင်းပေးပါ၊ ဝယ်ယူမှုကိုလျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါ။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းတို့သည်တာရှည်သွားသည်။
pro tip! စျေးဝယ်စင်ပေါ်ရှိသင့်ပြိုင်ဘက်များထံမှထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်မှတ်မိလွယ်သောခေါ်ဆိုမှုများနှင့်သင်၏ QR Code တွင်ထည့်ပါ။ "အထောက်အကူပြုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ပါ" ကြိုးစားပါ။
သင်၏ပြိုင်ဘက်များထံမှထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန် QR Code ပြုလုပ်ပြီးသင်၏အလှအပပစ္စည်းပေါ်တွင်တင်ပါ။
#4 သင်၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်အတွက် ၀ ယ်သူပိုမိုရယူပါ
ဘွန်းသစ္စာရှိမှုအစီရင်ခံစာ 2020 စားသုံးသူ 72% ခိုင်မာတဲ့သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များနှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်အကြံပြုဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကောင်တာတစ်ခုတွင်အသင်းဝင်အစီအစဉ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံကိုဖြည့်စွက်မည့်အစား၎င်းကို QR Code ဖြင့်ပြတ်တောက်စေပါသည်။
ပရိုဂရမ်ကိုလက်ငင်းစာရင်းသွင်းရန်သင်၏ QR Code ကိုသင်၏စတိုးဆိုင်နံရံများ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ကောင်တာများသို့မဟုတ်သင့်အလှအပပစ္စည်းများပေါ်တွင်တင်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးချောမွေ့စွာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကိုလွယ်ကူသောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ၀ ယ်ယူသူမည်မျှပိုများလာသည်ကိုဂရုပြုပါ။
ကုန်စည်ပြပွဲ (သို့) ပြပွဲသို့သွားနေပါသလား။ သင်၏အလှအပဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ပွဲလမ်းသဘင်များကိုကြီးမားသောနေရာများတွင်ကျင်းပလေ့ရှိပြီးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့်သင်၏တဲကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ လူများအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ရန်အတွက်ဝင်ပေါက်ရှိလက်ကမ်းကြော်ငြာများနှင့်ပိုစတာများအတွက်တည်နေရာ QR Code ကိုထည့်ပါ။
#6 အလှအပပစ္စည်းများအတွက် QR ကုဒ်များဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းကိုအားကောင်းစေပါ
အားကောင်းသောအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိလျှင်သုံးစွဲသူများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ် ပို၍ သစ္စာစောင့်သိကြသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအများစုသည်၎င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအနေဖြင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုပိုမိုနားလည်ကြောင်းပြောကြားသည်။ တစ် ဦး ကအမှတ်တံဆိပ်အသိုင်းအဝိုင်းလည်းအသစ်သောအသစ်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီပေးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများ၊ သစ္စာစောင့်သိသောစားသုံးသူများနှင့်လူမှုမီဒီယာတွင်လွှမ်းမိုးသူများသည်စကားလုံးများပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်၊ ရိုးသားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ၊ ဗွီဒီယိုများကိုဖြုတ်ပစ်ရန်၊ အကြံပြုချက်များထုတ်ပေးမည်။ သင်သည်စားသုံးသူအသစ်များရရှိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသူများနှင့်စေ့စပ်ထားပါသည်။
unboxing video ဖြည့်ပါ - ဤထုတ်ကုန်များကို QR ကုဒ်များဖြင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်
သင်၏ရပ်ရွာလူထု၏ဗျူဟာကိုထပ်မံမြှင့်တင်ရန် QR Code ပြုလုပ်သူကိုသုံးပါ။ သင်၏ QR Code ကိုသင်၏အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ကောင်တာများသို့မဟုတ်ဆိုင်တွင်းပြသမှုများတွင်ထည့်ပါ။
pro tip! သင်၏အလှအပထုတ်ကုန်နှင့်အတူ Instagram ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တင်သောစားသုံးသူများအတွက် 30% လျှော့စျေးပေးပါ။ သင်၏ QR Code ကို Instagram နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တင်ခြင်းသည်လွယ်ကူပြီးလွယ်ကူသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအာရုံစိုက်ပြီးအသစ်သောအရာများဖန်တီးနိုင်သည်။
အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်တော်တော်များများသည် Amazon, Sephora, Ulta စသည့်တတိယပါတီလက်လီရောင်းသူများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောစားသုံးသူဒေတာနှင့်စာရင်းဇယားများကိုလက်လှမ်းမီခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်စားသုံးသူအပြုအမူကိုအပြည့်အဝနားမလည်ခြင်းသည်သင်၏လှပသောအမှတ်တံဆိပ်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် ဦး တည်နိုင်သည်။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြီးထွားရန်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးပါတီအချက်အလက်များကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်ဟု ဦး ဆောင်စျေးကွက်များကအခိုင်အမာယုံကြည်ကြသည်။ သင်၏အလှအပထုတ်ကုန်များပါ ၀ င်သည့် QR ကုဒ်များကသင့်အားထိုအဖိုးတန်သောအချက်အလက်များကိုရရှိရန်ကူညီသည်။
သုံးစွဲသူများသည်သင်၏အလှအပပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူပြီးပြောင်းလဲနေသော QR Code ကိုစကင်ဖတ်သောအခါ၊ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၊ အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများနှင့်တည်နေရာအရေအတွက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်စုဆောင်းထားသည့်ပထမ ဦး ဆုံးပါတီအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ သင်၏လက်လီရောင်းဝယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်စာရင်းပြုစုပါ။ ဤနည်းဖြင့်လက်လီရောင်းချသူများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပင်သင်၏ဖောက်သည်များကိုပိုမိုနားလည်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ထပ်မံဝယ်ယူခြင်းများကို ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်။ အားလုံး QR Code ထုတ်လုပ်သူကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
စားသုံးသူအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံး ၀ င်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုစုဆောင်းရန် QR ကုဒ်များကကူညီနိုင်သေးသည်မသေချာသေးပါသလော။ ပိုမိုသိရှိရန် QR ကုဒ်များခြေရာခံ.
အလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက် QR ကုဒ်များကိုသင်စမ်းချင်ပါသလား။
သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် QR ကုဒ်များဖြင့်အရောင်းပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လိမ္မာပါးနပ်။ ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ထုပ်ပိုးခြင်းတွင်၊ ပိုစတာများနှင့်လက်ကမ်းကြော်ငြာများပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေဖြစ်စေ QR ကုဒ်များကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ။ သင်၏အလှအပအတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ QR ကုဒ်တစ်ခုလုပ်ပါ။ အဲဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
Kristiina Roosild သည် Pageloot ၏ blogger နှင့် content marketer ဖြစ်သည်။ မူလကအက်စတိုးနီးယားမှဖြစ်သော်လည်းသူမကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုသူမလှည့်ပတ်သင်တွေ့နိုင်သည်။ သူမသည်အပြင်ဘက်တွင်အလွန်ကောင်းသောသူမနှင့်သူမ၏နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သောဗဟုသုတများမျှဝေခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ နှင့်ချောကလက်!
အပေါ် QR ကုဒ်များ အဝတ်အစား
QR ကုဒ်များဖြစ်ကြသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာသေပြီလား